ပရီးမီးယားလိဂ် တစ်လတာအကောင်းဆုံး ကစားသမားဆုကို မရခဲ့ဖူးတဲ့ ဂန္ထ၀င်များ (၂)
22 Oct 2018 . 6:13 PM
ပရီးမီးယားလိဂ် တစ်လတာအကောင်းဆုံး ကစားသမားဆုဆိုတာက ပရိသတ်တွေ သိတဲ့အတိုင်း ရာသီတစ်ခုရဲ့ လအလိုက် ခြေစွမ်းပြနိုင်တဲ့သူတွေကို ပရီးမီးယားလိဂ်အဖွဲ့ချုပ်က ရွေးချယ်ချီးမြှင့်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆုကို ၁၉၉၄ သြဂုတ်လက စတင်ချီးမြှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ်သမိုင်းတစ်လျှောက် နာမည်ကျော်ကစားသမားတွေ တော်တော်များများ ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့တယ်။ အကြိမ်အများဆုံး ရရှိခဲ့တာက လီဗာပူးလ်ဂန္ထ၀င် စတီဗင်ဂျရတ် Steven Gerrard နဲ့ စပါးအသင်း လက်ရှိတိုက်စစ်မှူး ဟာရီကိန်း Harry Kane တို့ဖြစ်ပြီး (၆)ကြိမ်စီ ရရှိခဲ့တာပါ။ သူတို့နောက်မှာ အဂွဲရိုး Sergio Agüero ၊ ဗန်ပါစီ Robin van Persie ၊ ရွန်နီ Wayne Rooney တို့က (၅)ကြိမ်စီနဲ့ အများဆုံးဖြစ်နေတယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ်တစ်လတာ အကောင်းဆုံး ကစားသမားဆုကို နာမည်ကြီး ကစားသမားတွေ ရခဲ့ပေမယ့် ကစားသမားဘ၀တစ်လျှောက်လုံး မရခဲ့ဖူးတဲ့ ဂန္ထ၀င်တွေ ရှိခဲ့တာက တကယ့်ကို အံ့အားသင့်စရာပါ။ သူတို့ရဲ့ ကစားသမားဘ၀ အောင်မြင်မှုတွေအရ ဒီဆုနဲ့ ဘယ်လိုလွဲချော်ခဲ့လဲဆိုတာ စဉ်းစားမရအောင်ပါပဲ။ အဲဒီဂန္ထ၀င်တွေက ဘယ်သူတွေများလဲဆိုတာ အပိုင်း(၁)အဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ပြီး အခု အပိုင်း(၂)ကို ဆက်လက်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် . . .
အက်ရ်ှလေကိုး Ashley Cole
ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး ဘယ်နောက်ခံလူ စာရင်းဝင် အက်ရ်ှလေကိုးအတွက် ပရီးမီးယားလိဂ်၊ ချန်ပီယံလိဂ်၊ FA စတဲ့ နာမည်ကျော် ဆုဖလားတွေရဲ့ အရသာကို မြည်းစမ်းခွင့်ရခဲ့ပေမယ့် အဲဒီအထဲမှာ ပရီးမီးယားလိဂ် တစ်လတာအကောင်းဆုံးဆုတော့ မပါဝင်ခဲ့ဘူး။ ၁၉၉၉ ကနေ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ အာဆင်နယ်၊ ချယ်လ်ဆီးအသင်းတို့နဲ့အတူ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ (၁၄)နှစ်ကြာ ကျင်လည်ခဲ့ပေမယ့် ဒီဆု မရခဲ့တာက တကယ့်ကို မယုံနိုင်စရာပါပဲ။
ဂယ်ရီနဗီးလ် Gary Neville
မန်ယူအသင်းရဲ့ ညာနောက်ခံလူနေရာကို နှစ်ပေါင်းများစွာ သိမ်းပိုက်ခဲ့ပေမယ့် ဂယ်ရီနဗီးလ်ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်တစ်လတာ အကောင်းဆုံးဆုကိုတော့ တစ်ကြိမ်မှ မသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ မန်ယူအသင်းနဲ့အတူ One Club Player ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဂယ်ရီနဗီးလ်ရဲ့ ဆုဗီရိုထဲမှာ ပရီးမီးယားလိဂ်တစ်လတာ အကောင်းဆုံးဆု ထည့်သိမ်းဖုိ့အတွက် နေရာ မရှိလောက်ဘူးလို့ပဲ ဖြေသိမ့်ရတော့မှာပါ။
ဗီအဲရာ Patrick Vieira
အာဆင်နယ်ဂန္ထ၀င် ဗီအဲရာနဲ့ ခေတ်ပြိုင် ရွိုင်ကိန်း Roy Keane တောင် ပရီးမီးယားလိဂ်အကောင်းဆုံးဆုကို (၂)ကြိမ် ရခဲ့ဖူးပေမယ့် ဗီအဲရာကတော့ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ လျစ်လျူရှုခံခဲ့ရတယ်။ အာဆင်နယ် ကွင်းလယ်ဗိုလ်ချုပ်အဖြစ် (၉)ရာသီကြာ ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီး သမိုင်းဝင် အောင်မြင်မှုမှတ်တမ်းတွေ စိုက်ထူခဲ့သူ ဗီအဲရာဟာ ဒီဆုနဲ့ မထိုက်တန်ဘူးလို့ ဘယ်သူကမှ ထင်မြင်ယူနေမှာ မဟုတ်လောက်ပါဘူး။
ကာရေဂါ Jamie Carragher
တစ်ခေတ်တစ်ခါက လီဗာပူးလ်အသင်း ခံစစ်တံတိုင်းဖြစ်ခဲ့သူ ကာရေဂါလို ကစားသမားမျိုး ဒီဆုနဲ့ လွဲချော်ခဲ့တာဟာ မဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စလို့ပဲယူဆရမယ်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမားဘ၀ကို လီဗာပူးလ်တစ်သင်းတည်းမှာပဲ (၁၇)နှစ်ကြာ ဖြတ်သန်းခဲ့သူ ကာရေဂါရဲ့ ဆုဖလားအောင်မြင်မှုတွေကို ကြည့်ရင် ဒီဆုနဲ့ လွဲချော်ခဲ့တဲ့အတွက် သိပ်တော့ ၀မ်းနည်းနေလောက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ပရီးမီးယားလိဂ် တစ်လတာအကောင်းဆုံးဆု မရခဲ့ဘူးတဲ့ ကစားသမားတွေကို ကြည့်ရင် တကယ့်ကို အံ့အားသင့်စရာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ရဲ့ အောင်မြင်မှုမှတ်တမ်းအရ ဒီဆုနဲ့လွဲချော်ခဲ့ပေမယ့် ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ ဂန္ထ၀င်ကစားသမားတွေအဖြစ် ဆက်လက်ရပ်တည်နေမှာ အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ် . .
Photo:dreamteamfc,These Football Times,Getty Images
ပရီးမီးယားလိဂျ တဈလတာအကောငျးဆုံး ကစားသမားဆုကို မရခဲ့ဖူးတဲ့ ဂန်ထဝငျမြား (၂)
ပရီးမီးယားလိဂျ တဈလတာအကောငျးဆုံး ကစားသမားဆုဆိုတာက ပရိသတျတှေ သိတဲ့အတိုငျး ရာသီတဈခုရဲ့ လအလိုကျ ခွစှေမျးပွနိုငျတဲ့သူတှကေို ပရီးမီးယားလိဂျအဖှဲ့ခြုပျက ရှေးခယျြခြီးမွှငျ့တာဖွဈပါတယျ။ ဒီဆုကို ၁၉၉၄ သွဂုတျလက စတငျခြီးမွှငျ့ခဲ့တာဖွဈပွီး ပရီးမီးယားလိဂျသမိုငျးတဈလြှောကျ နာမညျကြျောကစားသမားတှေ တျောတျောမြားမြား ဆှတျခူးရရှိခဲ့တယျ။ အကွိမျအမြားဆုံး ရရှိခဲ့တာက လီဗာပူးလျဂန်ထဝငျ စတီဗငျဂရြတျ Steven Gerrard နဲ့ စပါးအသငျး လကျရှိတိုကျစဈမှူး ဟာရီကိနျး Harry Kane တို့ဖွဈပွီး (၆)ကွိမျစီ ရရှိခဲ့တာပါ။ သူတို့နောကျမှာ အဂှဲရိုး Sergio Agüero ၊ ဗနျပါစီ Robin van Persie ၊ ရှနျနီ Wayne Rooney တို့က (၅)ကွိမျစီနဲ့ အမြားဆုံးဖွဈနတေယျ။ ပရီးမီးယားလိဂျတဈလတာ အကောငျးဆုံး ကစားသမားဆုကို နာမညျကွီး ကစားသမားတှေ ရခဲ့ပမေယျ့ ကစားသမားဘဝတဈလြှောကျလုံး မရခဲ့ဖူးတဲ့ ဂန်ထဝငျတှေ ရှိခဲ့တာက တကယျ့ကို အံ့အားသငျ့စရာပါ။ သူတို့ရဲ့ ကစားသမားဘ၀ အောငျမွငျမှုတှအေရ ဒီဆုနဲ့ ဘယျလိုလှဲခြျောခဲ့လဲဆိုတာ စဉျးစားမရအောငျပါပဲ။ အဲဒီဂန်ထဝငျတှကေ ဘယျသူတှမြေားလဲဆိုတာ အပိုငျး(၁)အဖွဈ ဖျောပွခဲ့ပွီး အခု အပိုငျး(၂)ကို ဆကျလကျဖျောပွလိုကျပါတယျ . . .
အကျရျှလကေိုး Ashley Cole
ပရီးမီးယားလိဂျရဲ့ အကောငျးဆုံး ဘယျနောကျခံလူ စာရငျးဝငျ အကျရျှလကေိုးအတှကျ ပရီးမီးယားလိဂျ၊ ခနျြပီယံလိဂျ၊ FA စတဲ့ နာမညျကြျော ဆုဖလားတှရေဲ့ အရသာကို မွညျးစမျးခှငျ့ရခဲ့ပမေယျ့ အဲဒီအထဲမှာ ပရီးမီးယားလိဂျ တဈလတာအကောငျးဆုံးဆုတော့ မပါဝငျခဲ့ဘူး။ ၁၉၉၉ ကနေ ၂၀၁၄ ခုနှဈအထိ အာဆငျနယျ၊ ခယျြလျဆီးအသငျးတို့နဲ့အတူ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ (၁၄)နှဈကွာ ကငျြလညျခဲ့ပမေယျ့ ဒီဆု မရခဲ့တာက တကယျ့ကို မယုံနိုငျစရာပါပဲ။
ဂယျရီနဗီးလျ Gary Neville
မနျယူအသငျးရဲ့ ညာနောကျခံလူနရောကို နှဈပေါငျးမြားစှာ သိမျးပိုကျခဲ့ပမေယျ့ ဂယျရီနဗီးလျဟာ ပရီးမီးယားလိဂျတဈလတာ အကောငျးဆုံးဆုကိုတော့ တဈကွိမျမှ မသိမျးပိုကျနိုငျခဲ့ပါဘူး။ မနျယူအသငျးနဲ့အတူ One Club Player ဖွဈခဲ့တဲ့ ဂယျရီနဗီးလျရဲ့ ဆုဗီရိုထဲမှာ ပရီးမီးယားလိဂျတဈလတာ အကောငျးဆုံးဆု ထညျ့သိမျးဖုိ့အတှကျ နရော မရှိလောကျဘူးလို့ပဲ ဖွသေိမျ့ရတော့မှာပါ။
အာဆငျနယျဂန်ထဝငျ ဗီအဲရာနဲ့ ခတျေပွိုငျ ရှိုငျကိနျး Roy Keane တောငျ ပရီးမီးယားလိဂျအကောငျးဆုံးဆုကို (၂)ကွိမျ ရခဲ့ဖူးပမေယျ့ ဗီအဲရာကတော့ အကွိမျပေါငျးမြားစှာ လဈြလြူရှုခံခဲ့ရတယျ။ အာဆငျနယျ ကှငျးလယျဗိုလျခြုပျအဖွဈ (၉)ရာသီကွာ ဖွတျသနျးခဲ့ပွီး သမိုငျးဝငျ အောငျမွငျမှုမှတျတမျးတှေ စိုကျထူခဲ့သူ ဗီအဲရာဟာ ဒီဆုနဲ့ မထိုကျတနျဘူးလို့ ဘယျသူကမှ ထငျမွငျယူနမှော မဟုတျလောကျပါဘူး။
ကာရဂေါ Jamie Carragher
တဈခတျေတဈခါက လီဗာပူးလျအသငျး ခံစဈတံတိုငျးဖွဈခဲ့သူ ကာရဂေါလို ကစားသမားမြိုး ဒီဆုနဲ့ လှဲခြျောခဲ့တာဟာ မဖွဈသငျ့တဲ့ ကိစ်စလို့ပဲယူဆရမယျ။ ပရျောဖကျရှငျနယျကစားသမားဘဝကို လီဗာပူးလျတဈသငျးတညျးမှာပဲ (၁၇)နှဈကွာ ဖွတျသနျးခဲ့သူ ကာရဂေါရဲ့ ဆုဖလားအောငျမွငျမှုတှကေို ကွညျ့ရငျ ဒီဆုနဲ့ လှဲခြျောခဲ့တဲ့အတှကျ သိပျတော့ ဝမျးနညျးနလေောကျမှာ မဟုတျပါဘူး။
ပရီးမီးယားလိဂျ တဈလတာအကောငျးဆုံးဆု မရခဲ့ဘူးတဲ့ ကစားသမားတှကေို ကွညျ့ရငျ တကယျ့ကို အံ့အားသငျ့စရာပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ သူတို့ရဲ့ အောငျမွငျမှုမှတျတမျးအရ ဒီဆုနဲ့လှဲခြျောခဲ့ပမေယျ့ ပရီးမီးယားလိဂျရဲ့ ဂန်ထဝငျကစားသမားတှအေဖွဈ ဆကျလကျရပျတညျနမှော အမှနျပဲဖွဈပါတယျ . .
by Ko Kyue . 27 mins ago